Chii chaunogona kupa kune avo vari kutsvaga SEO?
Pane zvinhu zviviri zvinokosha zvevatengesi vanosimbisa bhizinesi ravo paIndaneti. Chinhu chokutanga ndechokuti tive netsika yekutsvaga injini yekugadzirisa iwe pachako, kudzidza maatoni e SEO mazano uye tutorials uye kuedza kuramba uchienda kune imwe nguva nekuenderera mberi kwekugadzira dhidhiyo yenyika. Chechipiri sarudzo ndeyokubhadhara muongorori weSeO kana kuti boka reongorori vane ruzivo rwakadaro munharaunda iyi. Muchiitiko ichi, iwe uchada kuisa mari mune mukugadzira kwako. Zvisinei, iwe unogona kuwana yakakwirira kudzoka kumari yekutsvaga kana vhesi vhesi kushatisa bhajeti yako pamusana wehutano hwehutano.
Nyaya ino yakagadzirirwa avo vatengesi vari kuIndaneti vari kutsvaga michina yekutsvaga injini yekutsvaga kuvandudza kushandiswa kwavo kwebhizimusi.Kune dzimwe humwe hutsika hunodiwa hunoda kubva kune optimization service providers.
Chii chatinofanira kutsvaga pakutsvaga injini yekuita mabasa?
Mazuva ano kune kambani dzakawanda dzekugadzirisa makambani anopa izvo zvinonzi ". "Hazvibatsiri kana vachipa zvinhu zvepamusoro kana zvinodhura. Kana SEO mazano ekupa vashandi vasingazivi chekuita newebsite yako uye vane ruzivo rwakawanda munharaunda ino, vangangodaro vanoda kubudisa mari yako. Kune zvakawanda zvezvinhu zvinopinda mumufananidzo wekugadzirisa, uye zvinotora makore akawanda ruzivo kuti unzwisise mazano ari kushanda uye chii chisingagoni kuunza chero kukosha. Uyezve, kana iwe ukashanda pamwe nesangano rechangobva kugadzirwa rakagadzirwa, SEO nyanzvi dzinoshanda ikoko dzichadzidzira pane yako nzvimbo.
SEO zvizere zvakakwana kunzwisisa
Ndinokurudzira zvakasimba kudzivisa makambani anopa humwe humwe hutsvene hunotsvaga kutsvaga maitiro. Kuti uwedzere kugadzirisa kwako kambani kubudirira, unoda kambani iyo inoswedera pakugadzirisa maitiro kubva kumativi ose uye ichakwanisa kukupa nemamwe machengeterwo emakambani akadai sehuwandu hwemashoko ekudhinda, e-mail marketing, nezvimwe zvakadaro.
Kana ukatanga kutarisa maSeO services, inguva yekudzidza zvakawanda pamusoro pekunyengedzera kwenhema nevateereri.
Muganhu wekutanga wokugadzirisa unyanzvi. Inosanganisira zvivakwa zvewebhu, HTML code, kugadzira, uye kudirana. Professional optimization inogadzira kuti zviri nyore sei kana zvakaoma ndezvekutsvaga mabhii kuti uende uye kurondedzera nzvimbo yako yehuwandu.
Muganhu wechipiri wokugadzirisa uri pa-page kukwanisa. Pa-peji kugadzirisa zvinoreva mukati mewebhu webhuwo, HTML tags, zvinyorwa, metadata uye tsvakurudzo yezvinyorwa. Izvi zvinogadzirirwa kuwedzera zvakananga kutsvaga kutsvaga kune yako yepaiti uye kusimudzira mutengo wako wokutendeuka.
Muganhu wechitatu wekugadzirisa mararamiro ekugadzirisa-peji. Icho chimwe chezvinyorwa zvinokosha zvekugadzirisa nzira. Iyo inoshandiswa kuvandudza hurumende hurumende mumaziso ezvinjini. Off-site optimization primary inoreva kubatana kwekubatana.
Saka, tsvakurudzo yako yekugadzirisa inyanzvi yevashandi inoda kunzwisisa nekuve yakagadzirira kushandisa zvese izvi zvinoshandiswa pakugadzirisa muwebsite yako Source .